Wada hadallada dowladda Federaalka ah iyo Somaliland waa fursad xeelad u baahan! | Laashin iyo Hal-abuur
Wada hadallada dowladda Federaalka ah iyo Somaliland waa fursad xeelad u baahan!
Qormadan waxa ay soo koobaysaa taariikhda wadahadallada iyo caqabadahii hore, ee sababay in wadahadalku hakad galo. Faallaynta waxyaabaha ka hirgalay qodobadii lagu heshiiyay iyo waxyaabaha lagamamaarmaanka u ah qabsoomida wadahadal mirodhal ah.
Siyaasiyiin ka soojeeda gobollada waqooyi ayaa qayb ka ahaa dhammaan dowladihii dalka soo maray burburkii ka hor, laga soo bilaabo midowgii labada gobol ee 1-dii July 1960-kii oo ra’iisul wasaarihii ugu horeeyay ee Soomaaliya uu ahaa Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal (AUN) iyo sanadihii u dhaxeeyay 1967 iyo 1969 oo uu isla Cigaal ahaa ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Ugu dambayn, wadahadal dhex mara dowladda federalka iyo Somaliland ayaa weli ah fursad xeelad u baahan. Haddii dowladda madaxweyne Farmaajo garwadeenka ka yahay ay la timaaddo qorshe ka duwan kuwii hore waxa ay noqon doontaa bilow keeni kara xal cusub. Somaliland oo maamul cusub ka dhashayna waxaa ka muuqata caaboonnaan dareen xambaarsan balse keeni karta nugeyl iyo bisayl ka duwan qaabka hadda wax u socdaan.
Cabdiwali Cabdiqadir Sheekh Faarax